China ICE Industrial Reverse Osmosis System maka Jụrụ Tower Water System Manufacturer and Supplier | Yubing
Kedu ihe bụ Osmosis Reverse?
Mmiri a na-agabiga na RO membrane a na-akpọ ya "permeate" na nnu ndị etisara etisasị nke RO membrane a na-akpọ dịka "uche". Usoro RO nke na-agba ọsọ nke ọma nwere ike wepu ihe dịka 99.5% nke nnu na-agbaze agbaze na adịghị ọcha.
Industrial Reverse Osmosis RO Water ọgwụgwọ Usoro
Reverselọ ọrụ osmosis na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na ntanetị ọtụtụ ihe ntanetị, ihe dị nro mmiri ma ọ bụ usoro mgbochi mgbochi, usoro usoro de-chlorination, na-agbanwe osmosis unit na membranes ọkara, na UV sterilizer ma ọ bụ post chlorination dị ka a post ọgwụgwọ. Igwe ndị a RO na-etinye teknụzụ nke osmosis azụ site na ịbuga mmiri na-eri nri site na ntanetị dị iche iche iji wepụ ihe ndị buru ibu karịa 10-micron. Mgbe ahụ, mmiri na-agba mmiri site na kemikal na-egbochi scalants kemịkalụ iji chịkwaa isi ike na-adịghị ike nke nwere ike ibibi membranes nke igwe RO. Nhọrọ ndị a nwere ikike iwepụ ekweghị ekwe, chlorine, isi, agba, igwe na sọlfọ. Mmiri ahụ na-aga n'ihu n'ime akụkụ osmosis na-agbanwe agbanwe ebe mgbapụta dị elu na-etinye nrụgide dị ukwuu na ngwọta ahụ siri ike, na-ekewapụ nnu ndị fọdụrụ, mineral, na adịghị ọcha nke nzacha ahụ enweghị ike ijide. Mmiri dị ọhụrụ, mmiri ọableụ comesụ na-apụta site na nsọtụ nrụgide nke akpụkpọ ahụ mgbe a na-ewepụ nnu, mineral, na adịghị ọcha ndị ọzọ n'ime drain na nsọtụ nke ọzọ. N'ikpeazụ, a gafere mmiri ahụ site na UV sterilizer (ma ọ bụ post chlorination) iji gbuo nje ọ bụla na ụmụ nje ndị ka dị na mmiri.
Industrial Reverse Osmosis System yingzụ Guide
Iji họrọ ngwaahịa RO ziri ezi, a ga-enyerịrị ozi ndị a:
1.Flow ọnụego (GPD, m3 / ụbọchị, wdg)
2.FDS mmiri TDS na nyocha mmiri: ozi a dị mkpa iji gbochie membranes site na nsị, yana nyere anyị aka ịhọrọ ezi ọgwụgwọ.
3.Iron na manganese ga-ewepụ tupu mmiri abanye na mpaghara osmosis
4.TSS ga-ewepụ tupu ịbanye usoro Industrial RO
5.SDI ga-erughị 3
6.Water kwesịrị ịbụ na mmanụ na griiz
8 voltaiki dị, na-adọ na ugboro ole (208, 460, 380, 415V)
9. Akụkụ nke ebe a ga-arụ ọrụ ebe a ga-etinye System RO System
Nke gara aga: ICE High arụmọrụ Sand Filtration System maka Jụrụ owlọ Elu 'Circulation Water Treatment
Osote: ICE Industrial Water Softener System maka Jụrụ Tower Source Water
Industrial Reverse Osmosis akụrụngwa
Industrial RO mmiri nyo
ulo oru RO mmiri asacha usoro
Rlọ ọrụ mmepụta ụlọ ọrụ mmiri mmiri RO
Industrial mmiri ọgwụgwọ RO akụrụngwa
RO usoro jụrụ ụlọ elu mmiri mmiri
RO mmiri purifier maka jụrụ ụlọ elu
Ọgwụ mmiri mmiri RO maka usoro jụrụ oyi
ICE MBR Membrane Module nke Industrial Wastewate ...
ICE High arụmọrụ Sand Filtration System maka ...